नेपालीमा आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । – Education Awardees
नेपालीमा आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
२५ कार्तिक २०७४, शनिबार २२:१०
चितवनको शरदपुर माविमा १३ वर्ष पढाएकी राधा पौडेल यतिखेर अमेरिका बस्दै आएकी छन् । डेढ दशकदेखि गीतसंगीतमा लागेकी राधा हाल एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति अमेरिकाकी उपाध्यक्षसमेत हुन् । समय र परिस्थतिले विदेशिनु परेको बताउने उनी अमेरिकामा बसे पनि आफू नेपाली भाषा र संस्कृति संरक्षणमा भने लागिरहेको बताउँछिन् । अमेरिकामा मोबाइल व्यवसाय गरिरहेकी उनी अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य नेपाली समाजको पहिलो पुरस्कारको प्रायोजकसमेत हुन् । राधासँग सिर्जना अर्यालले गरेको कुराकानीका अंश : नेपालीकाे अनलार्इनमा प्रस्तुत गरेका छाै :
तपाई जन्मना साथ ममी ड्याडी भन्ने देश जानु भएछ नि ?
विभिन्न कारण र परिस्थितिले म अमेरिकामा छु । अमेरिकामा जन्मिएका नेपालीका छोराछोरीले पनि ममी नै भन्छन् । ममी भनेको आमा हो, आमा भन्न सुहाउँछ, यो उत्कृष्ट छ भनेर हामीले हाम्रा सन्तानलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।
तपाई अमेरिका कसरी पुग्नु भयो ?
के गर्नुहुन्छ अमेरीकामा ?
तपाई संगीत र साहित्य क्षेत्रमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ ?
गैरआवासीय नेपाली संघमा कहिलेदेखि आवद्ध हुनु भयो ?
गैरआवासीय संघ अमेरिकाले के गरिरहेको छ त ?
सामुदायिक भवन भन्नाले ?
– हामी विभिन्न माध्यमबाट अमेरिका पुगेका छौं । कोही विद्यार्थीका रूपमा, कोही डीभी परेर र त कोही विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्न अमेरिका पुगेका छन् । यसका लागि हामीले दूतावाससँग पनि सम्पर्क गरिरहेका छौं । उहाँहरूमध्ये कतिलाई भाषाको समस्या छ, कतिलाई सीप र दक्षताको समस्या छ । धेरै विद्यार्थीलाई कामसँगै पढाइ कसरी अघि बढाउने भन्ने समस्या छ । एक्लोपनका कारण अमेरिकामा रहेका नेपालीमा आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसैले उनीहरूलाई कसरी पारिवारिक वातावरण दिन सकिन्छ ? भनेर हामी लागेका छौं । अमेरिकाका महिला एकदमै सौखिन हुन्छन् । उनीहरू पार्लर जाने, सपिङ धेरै गर्ने हुन्छन् । त्यसैले यस्ता काम सिकाउन, केयर गिभर, घरको सरसफाइका लागि कुन केमिकल कति राख्नेलगायतका तालिम दिनेलगायत नेपाली भाषा र संस्कृति संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विभिन्न कार्यक्रमका लागि यस्ता सामुदायिक भवन आवश्यक परेको हो ।
नेपालमा के कस्ता सहयोग गरिरहनु भाको छ ?
अमेरिकाी साहित्यको नेपालीसँग तुलना गर्नुपर्दा के भन्नु हुन्छ ?
अमेरिकाको महिलाको अवस्था कस्तो छ ?